‘तिमीसँग’मा प्रेमगीत २ र ए मेरो हजुर २ को गन्ध (ट्रेलर)FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
‘तिमीसँग’मा प्रेमगीत २ र ए मेरो हजुर २ को गन्ध (ट्रेलर)
फिल्मी फण्डा । फिल्म तिमीसँगको ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । दुई गीत सार्वजनिक गरिसकेको फिल्मका निर्माण टिमले आईतवार राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको हो । फिल्मको ट्रेलर हेर्दा कता–कता प्रेमगीत २ र ए मेरो हजुर २ को गन्ध देखिन्छ । ट्रेलरमा देखिएको तीन कलाकारहरु साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह, आकाश श्रेष्ठ र नाजिर हुसेनको ड्रामा र गीत संगीत तथा लोकेशन वाईज ए मेरो हजुर २ को गन्ध देखिन्छ ।
ट्रेलरमा देखिएको विदेशबाट घुम्न आएकी साम्रज्ञीको यात्रा र यात्राबीचको लभ सिनहरु हेर्दा फिल्म प्रेमगीत २ को गन्ध देखिन्छ । यस अर्थमा प्रेमगीत २ लाई ए मेरो हजुर २ को तरिकाले प्रस्तुत गरिएको जस्तो फिल्म तिमीसँगको ट्रेलर मा देखिन्छ । यसो त नेपाली फिल्मबाट प्रभावित अन्य धेरै नेपाली फिल्महरु पनि नभएको हैन । जे होस् फिल्ममा प्रस्ुतत तीनै कलाकारको काम, गीत संगीत र मेकिङ बन्ने राम्रो देखिन्छ । ट्रेलर सार्वजनिक कार्यक्रममा साम्राज्ञी माथी गाउँले केटीको भुमिका र ट्याटुको विषयमा प्रश्न उठेको थियो ।
प्रश्नमा साम्रज्ञी खासै प्रस्तुत हुन सकेन । केही प्रश्नमा भने उनी तुच्छ स्वाभावमा प्रस्तुत भएकी छिन् । उनी मिडिया सामु यसरी किन रिसाईन् र किन बोल्न चाहिनन् ? त्यो उनैलाई थाहा होला । फिल्ममा शिशिर रानाको निर्देशन, सुशिल क्षेत्रीको छायांकन, कविराज गहतराज र रामजी लामिछानेको कोरियोग्राफी रहेको छ । फिल्म तिमीसँगलाई नमन प्रोडक्शनको ब्यानरमा शिशिर राणाले निर्माण गरेका हुन् ।